စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 27/12/2019)
ထဲမှာမြို့ကြီးများ နယ်သာလန် သူတို့ရဲ့စက်ဘီးကိုချစ်. Utrecht က၎င်း၏စက်ဘီးသို့တွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အခြေခံအဆောက်အဦများ. Long ကစက်ဘီးလမ်းများနှင့်ကြီးမားသောယာဉ်ရပ်နားအဆောက်အဦကလွယ်ကူအဲဒီမှာစက်ဘီးကိုသုံးပါစေ.
Antwerp ဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့အများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေသောမြို့ဖြစ်၏, တစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အတူ ကွန်ယက်ကို စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်း၏. နောက်ထပ်ပြုလုပ်တိုးတက်အောင်ရည်ရွယ်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများနှင့်အတူ, Antwerp ဧကန်အမှန်ဥရောပမှာထိပ်တန်းစက်ဘီးစီးခရီးစဉ်တို့တွင်အနေဖို့ပါလိမ့်မယ်.
မြူးနစ် တစ်ကျယ်ပြန့်စက်ဘီးကွန်ယက်ကိုဇုန်တည်ဆောက်ရန်နှင့်စက်ဘီးစီးအခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်စေရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်. အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ် 30% စက်ဘီးအဘို့အပုံစံများဝေစု. သင်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ပေါ်မြူးနစ်န်းကျင်ရတဲ့စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျဘာလင်ကနေရထားနဲ့အဲဒီမှာခရီးသွားလာနိုင်, ဗီယင်နာ, နှင့်ဇူးရစ်, အခြားမြို့များအကြား.
သင်တစ်ဦးသာသင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုအသုံးပြုပြီးဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံး destination သည်အချို့မှခရီးစဉ်နှင့်ရထားဆပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? တစ်သက်တာ၏စွန့်စားမှုအဘို့အဆင်သင့် Get, နှင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် စောစော!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)